Disneyland Paris akatarisa naka! Izvi anoperekedza pamusoro sei kuronga zvakanaka Disneyland pazororo Paris panguva yechando uye chirimo, asi zviri nokutendeseka kunoshamisa ose mwaka. Recently, nekuda kwekugadziriswa kukuru pasati payeukwa kweDisney Paris, zvakawanda paki rakadzorerwa kuti runako rwayo yepakutanga. The mhemberero yacho haasisiri, asi pane achiri akanaka. Vazhinji varaidzo idzva iri kugara! YAY! Zvichakubatsirawo kuti mberi vaisanganisa pamwe Halloween uye Christmas varaidzo kuburikidza pakupera kwegore.
Kana uri kufunga kushanyira mukutanga 2019, iyo Nhoroondo dzeChisimba Star Wars chiitiko chinotanga kubva munaNdira 12 kuna March 17, 2019, uye Pirates & Mambokadzi Mutambo uchaitika kubva munaNdira 19 kuna March 17, 2019. Mushure maizvozvo, Musashamisika Season pamusoro Super-Heroes anotomutiza March 23 kuna June 16, 2019, uye Lion King uye Mutambo weJungle uchaitika kubva muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu 2019, uchiteverwa Halloween uye Kisimusi mwaka.
Kana iwe uri wenguva refu-kuronga uye iwe uchida kuve wakagadzirira zvakakwana kune yako Disneyland zororo muParis munguva yechando uye zhizha, ipapo Info ichi achakuisa kunyemwerera. Disneyland Paris akazivisa kwayo kwenguva refu urongwa dzinosanganisira Musashamisika, Star Wars, uye chando sezvo chikamu $2.5 bhiriyoni revitalization kuna Walt Disney Studios Park.
Kana uri kufunga kushanyira mukutanga 2019, iyo Nhoroondo dzeChisimba Star Wars chiitiko chinotanga kubva munaNdira 12 kuna March 17, 2019, uye Pirates & Mambokadzi Mutambo uchaitika kubva munaNdira 19 kuna March 17, 2019. Mushure maizvozvo, Musashamisika Season pamusoro Super-Heroes anotomutiza March 23 kuna June 16, 2019, uye Lion King uye Jungle Festival zvichaitika kubva muna Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu 2019, uchiteverwa Halloween uye Christmas nemwaka.
pasina mubvunzo, zvikuru varaidza nguva kushanyira Disneyland Paris Krisimasi-kodzero akapoteredza mid-November kana inotanga. yemanyorero, Disney zvaJehovha Enchanted Christmas anomhanya kubva mangwanani November kuburikidza January mangwanani. Ino inguva yakanakisa yekushanyira Disneyland Paris kune imwe varaidzo yemwaka uye kushongedzwa kwakanaka kwese kwakatenderedza paki. Plus, haugoni kurova kubata Guta Paris mumwedzi zororo.
Ronga mberi uye nokuponesa, nezvakanakisisa Kuwanikwa musi Winter 2019/2020 pamwe vanosvika vachibva 7fung Mbudzi 2019 kuti 1there Kubvumbi 2020. Ronga zororo rako reroto kufanoita!
Hezvino izvo zvatinofunga iwe unofanirwa kuisa pamberi pekushanya kune Disneyland paki. Vamwe vavo icharira kujairana kana wanga kune American mumapaki, asi pane misiyano kazhinji zvakakwana (kana rushoma kana aesthetic) kuti shanduro Paris vanonzwawo nemamwe. Uye iyo yakanyanya kutasva pano ndeyechokwadi ye-ye-ye-mhando chinokwezva icho chinobatanidza zvekare Disney manomano neanorova nyowani nyaya..
Agadzirira Disneyland Vacation muParis Munguva Winter uye Summer uye yakaisvonaka shanduro Disneyland munyika? Jump pamusoro zvinodzidzisa Paris achibatsirwa SaveATrain Hapana yepamusoro mari yekuwedzera, izvo zvinoreva mari yakawanda kuti Vatasvi! Book tikiti mumaminitsi.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdisneyland-vacation-paris%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#disneyinsummer #disneylandfrance #DisneyParis Disneyland disneywinter europetravel www trainjourney chitima mazano travelfrance sevanhice